Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Turkiga » Turkiga ayaa adkeeyay xayiraadaha COVID ee soogalootiga ajaanibta ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Turkiga • Wararka kala duwan
Cusboonaysiinta waxaa loo hirgaliyay si loo xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19 ee Turkiga, waxaana lagu wadaa inuu dhaqangalo Sabtida, Ogosto 4.
Turkigu wuxuu cusboonaysiiyaa xannibaadaha ka hortagga COVID ee soogalootiga ajaanibta ah.
Xeerarka ayaa looga golleeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19 ee Turkiga.
Xeerarka la cusbooneysiiyay ayaa lagu wadaa inay dhaqan galaan berrito.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Turkiga ayaa maanta soo saartay wareegto, iyadoo ku dhawaaqday cusbooneysiin cusub oo ku saabsan shuruudaha iyo xannibaadda dadka soo galaya ee ka imaanaya dibadda.
Liiska cas: Brazil, Koonfur Afrika, Nepal, iyo Sri Lanka
Hakinta duulimaadyada tooska ah ee ka Brazil, Koonfur Afrika, Nepal, iyo Sri Lanka wuu socon doonaa ilaa ogeysiis dambe.
Rakaabkii tagay dalalkan 14 -kii maalmood ee la soo dhaafay ayaa laga codsan doonaa inay soo gudbiyaan natiijada baaritaanka PCR ee taban oo la helay ugu badnaan 72 saacadood kahor intaysan gelin Turkey.
Waxay sidoo kale ku karantiilnaan doonaan 14 maalmood meelaha ay go'aamiyaan guddoomiyaasha gobollada, dhammaadkaas oo imtixaan taban loo baahan doono hal mar oo kale. Haddii ay jirto natiijo tijaabo oo togan, bukaanka waxaa lagu hayn doonaa go'doon, taas oo ku dhammaan doonta natiijo xun 14ka maalmood ee soo socda.
Bangladesh, India iyo Pakistan
Xeerarka socdaalka ee Bangladesh, India, iyo Pakistan ayaa la fududeeyay, oo rakaabkii ka yimid dalalkan, ama kuwii tagay dalalkan 14 -kii maalmood ee la soo dhaafay, waxaa laga codsan doonaa inay soo gudbiyaan natiijada baaritaanka PCR -ga ee xun oo la helay ilaa 72 saacadood ka hor.
Dadka diiwaangeliya qaadashada laba qiyaasood oo ah tallaallada COVID-19 oo oggolaansho ka helay Ururka Caafimaadka Adduunka ama Turkiga ama hal qiyaas tallaalka Johnson & Johnson ugu yaraan 14 maalmood ka hor inta aysan soo gelin Turkiga ayaa laga dhaafi doonaa karantiil.
UK, Iran, Masar iyo Singapore
Rakaabka ka imanaya UK, Iran, Masar, ama Singapore waxaa laga rabaa inay soo gudbiyaan natiijo taban oo ka timid baaritaannada PCR oo la sameeyay ugu badnaan 72 saacadood kahor gelitaanka.
Rakaabka ka safraya Afgaanistaan, kuwa bixin kara dukumenti muujinaya in la siiyay tallaalka COVID-19 14kii maalmood ee la soo dhaafay ama ka soo kabashada caabuqa COVID-19 lixdii bilood ee la soo dhaafay uma baahna natiijo baaritaan ama karantiil.